September 2018 - Page 2 of 6 - Puntland Mirror Believable Media Website
September 26, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa raaligelin ka bixisay hadal Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali uu dhawaan jeediyay oo taabanayay dadka Koonfur Galbeed. “Puntland waxay u sheegaysaa shacab weynaha Koonfur Galbeed in Puntland iyo Koonfur Galbeed ay […]
September 25, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dilal kala duwan oo ka dhan ah dad shacab ah ayaa ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho saacadihii lasoo dhaafay, sida ay wararku sheegayaan. Shaqaale katirsanaa shirkadaha isgaarsiinta oo magaciisa lagu sheegay Maxamuud Cabdi […]
September 24, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) ISIS ayaa sheegatay masuuliyada dilka askari katirsan ciidamada Puntland maanta oo isniin ah gudaha magaalada Boosaaso, wakaalada wararka ISIS ee Acmaaq ayaa sheegtay galabta oo Isniin ah. Hal askari oo katirsan ciidamada ilaalada […]
Garowe-(Puntland Mirror) Islamic State has claimed responsibility for killing Puntland soldier on Monday in Bosaso town, group’s Amaq news agency said Monday afternoon. One soldier of Puntland presidency guard identified as Ahmed Mohamed Jama Hurfe […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa shaqada ka ceyriyay taliyaha booliiska gobolka Nugaal Faarax Galangooli, sida lagu sheegay digreeto kasoo baxday xafiiska madaxtooyada maanta oo Isniin ah. Madaxweynaha ayaa si kumeelgaar Janaraal Muxiyadiin […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa xilka ka qaaday guddoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faroweyne, sida lagu sheegay digreeto kasoo baxday xafiiska madaxtooyada maanta oo Isniin ah. Madaxweynaha ayaa Cabdisalaam Xasan Xirsi oo […]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Askari katirsan ciidamada Puntland ayaa niman hubeysan oo aan la garanayn ku dileen magaalada Boosaaso maanta oo Isniin ah, sida ilo-wareed katirsan haayadaha ammaanka uu u sheegay warsidaha Puntland Mirror. Askari kale ayaa […]
Bosaso-(Puntland Mirror) A Puntland soldier was killed on Monday by unknown gunmen in Bosaso, security source told Puntland Mirror. Another soldier was injured in the shooting by the gunmen who escaped from the spot, according […]
Dhuusamareeb-(Puntland Mirror) Maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in ay suurtagal ahayn in ay yimaadaan Muqdisho. Bayaan maanta oo Axad ah kasoo baxay xafiiska Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa lagu eedeeyay in madaxtooyada Soomaaliya […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasiirkii Wasaaradda Deegaanka iyo Isbadalka Cimilada Puntland Cali Cabdullaahi Warsame ayaa xilka iskacasilay maanta oo Axad ah, isaga oo ku andacooday musuqmaasuq ka dhex jira mashaariic horumarineed. Warqada iscasilaadiisa, Cali ayaa ku sheegay […]